2020 Channel wuxuu noqon doonaa Sannadka Magaalada Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulChannel 2020 wuxuu noqon doonaa Sannadka Magaalada Istanbul
03 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa daabacay maqaal cinwaan looga dhigay Kanal 2020 wuxuu noqon doonaa Sannadka Channel İstanbul ee instanbul ee bisha Janaayo ee joornaalka Raillife.
Tan iyo maalintii ugu horreysay ee xafiiska, waxaan hirgelinay mashaariic muhiim ah annaga oo hoos imaneyna hoggaankayaga Madaxweynaha iyada oo la raacayo yoolalka aan higsaneyno ee Dowladdeena dejisay.
Big oo xoog badan, badan oo ka mid ah mashaariicda maalgashiga ogaaday in Turkey iyo jir goolka our; Buundada Yavuz Sultan Selim, buundada Osmangazi, Eurasia Tunnel, garoonka diyaaradaha Istanbul, Marmaray, Baku-Tbilisi Kars Railway, Wadooyinka Tareenka Xawaaraha Sare, wadooyinka laamiga ah, jidadka waaweyn, gegooyinka diyaaradaha, maraakiibta, sida Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha ayaa galey mashaariic badan. Waxaan maalgelinay 17 bilyan oo liras ah oo Turkiga ah muddo 757 sano ah. Sanadka 2019, sida sanadihii hore, waxaan bilownay mashaariicdeena waaween. mashaariicda Rafaa aannu la qorsheeyey mustaqbalka ee Turkey siiyey adeega.
Mashruuc kale oo baaxad leh sanadka 2020; Si kale haddii loo dhigo, waxaan hirgalinaynaa Kanal Istanbul. Mashruucan, ma yarayn doonno kaliya rarka taraafikada ee marakabka Bosphorus. Waxaan sidoo kale yareyn doonnaa khataraha ka dhalan kara maraakiibta sidda badeecada halista ah ee ku sugan Bosphorus. Waxaan sidoo kale u abuuri doonnaa badal kale maraakiibta iyo booyadaha aan dooneynin inay maraan Bosphorus iyagoon sugin. Maraakiibta xamuulka qaada ee caalamiga ah ayaa u isticmaali doona Kanal Istanbul lacag yar. Waxay sidoo kale ka takhalusi doonaan culayska dhaqaale ee dhici kara sababta oo ah muddo toddobaad ah oo la sugo. Gaar ahaan sababtoo ah wareejinta ganacsiga adduunka xagga bari, tirada maraakiibta adeegsanaya doonyaha ayaa si weyn kor ugu kici doona mustaqbalka dhow. Xaqiiqdii, tirada maraakiibta loo adeegsado Bosphorus 20 sano ayaa la filayaa inay gaarto 70 kun. Marka la soo koobo, Kanal Istanbul kaliya maahan mashruuca maanta laakiin sidoo kale berrito. Kanal Istanbul waa mashruuc badbaadin doona Bosphorus shilalka. 2020 wuxuu noqon doonaa sanadka Kanal Istanbul.
Channel Istanbul waa goor, 3. garoonka diyaaradaha ayaa noqon doona mid hooseeya
Channel TV wuxuu noqon doonaa noocaan (Video)
Channel Crazy Channel waxay noqon doontaa magaalo cusub oo Istanbul ah
Waddada mashruuca Channel Istanbul ayaa dhawaan lagu dhawaaqi doonaa
Kanal Istanbul wuxuu noqon doonaa mashruuc dhif ah
Shilalka ka dhacay Bosphorus
Joornaalka Raillife ee January